को-रोना भाइरस बाट एकैदिन १६४ जनाको मृ`त्यु ! - Info Nepal
INFONPLअन्तराष्ट्रियको-रोना भाइरस बाट एकैदिन १६४ जनाको मृ`त्यु !
ब्राजिलमा शुक्रबारदेखि शनिबारसम्मको २४ घन्टामा मात्र को- रोना भाइरसका १६४ जनाको ज्यान गएको छ । ब्राजिलको स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिएको जानकारीअनुसार यहाँ पछिल्ला केही हप्तामा को- रोनाको सङ्क्रमणका साथै मृ- त्यु हुनेको संख्या पनि बढेको पाइएको छ ।
साथै गएको २४ घन्टामा यहाँ ४ हजार १४६ जनामा सङ्क्रमण भएको छ । यहाँ पछिल्लो समयमा को- रोना भाइरसको घा- तक भनिएको ओ- मिक्रोन भेरियन्ट पनि बढेको पाइएको छ । यहाँ यो भाइरसको सङ्क्रमण सुरु भएयता ६ लाख १८ हजार ३९२ जनाको यही प्रकोपबाट नि- धन भएको बताइएको छ ।
त्यसैगरी यहाँ २ करोड २२ लाखभन्दा बढी सङ्क्रमित भएका छन् । यहाँ पछिल्लो समयमा को- रोना भाइरसको पूर्ण मात्राको खोप लगाउने नागरिकको संख्या बढेको छ तर सङ्क्रमण पनि बढेको पाइएको छ । यहाँका ६८ प्रतिशत नागरिकले को- भिड विरुद्धको खोप लगाएका छन् ।
ब्राजिल विश्वमै को- रोना भाइरसका कारण सबैभन्दा बढी नागरिकको ज्या- न जाने देशमा अ-मेरिकापछि दोस्रोमा पर्दछ । को- रोना भाइरसबाट सबैभन्दा बढी अमेरिकी नागरिकको ज्या- न गएको छ ।